My Life asaDoctor ဆရာဝန်ဘဝ စာမျက်နှာ: Hippocratic Oath (ဟစ်ပိုခရေးတီးစ်) ပဋိညာဉ်
• I promise that my medical knowledge will be used to benefit people’s health; patients are my first concern. I will listen to them, and provide the best care I can. I will be honest, respectful, and compassionate towards them.
• ကျွန်ုပ်၏ ဆေးပညာသည် လူတို့၏ အကျိုးစီးပွါးအတွက် အသုံးချပါမည်ကို ကတိပေးပါသည်။ လူနာသည် ပဌမ ဦးစားပေး ဖြစ်သည်။ သူတို့ပြောသည်ကို နားထောင်၍ တတ်စွမ်းသရွေ့ စောင့်ရှောက်ပါမည်။ ရိုးသားသော ကရုဏာဖြင့် လေးစားခြင်းကို ရယူပါမည်။
• I will do my best to help anyone in medical need, in emergencies. I will make every effort to ensure the rights of all patients are respected, including vulnerable groups who lack means of making their needs known.
• မည်သူ့ကိုမဆို အရေးပေါ် ကျန်မာရေး လိုအပ်ချက် ရှိလာလျှင် အကောင်းဆုံး အကူအညီပေးပါမည်။ လိုအပ်ချက် မပြည့်စုံကြသော ရောဂါဝေဒနာ ရလွယ်ကြသူများ အပါအ၀င် လူနာတို့၏ အခွင့်အရေးကို မည်သည့် အခါမဆို လေးစားပါမည်။
• I will exercise my professional judgment as independently as possible, uninfluenced by political pressure or the social standing of my patient. I will not put personal profit or advancement above my duty to my patient.
• ကျွန်ုပ်၏ ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်အား နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးတို့၏ သက်ရောက်မှုများမှ ကင်းပလျှက် အတတ်နိုင်ဆုံး လွတ်လပ်စွာ ချမှတ်ပါမည်။ လူနာအတွက် ထမ်းရွက်မှုအပေါ်မှာ အမြတ်ထုတ်ခြင်း၊ ရာထူး တိုးခြင်းတို့ အတွက် လုပ်ဆောင်မည် မဟုတ်ပါ။
• I recognize the special value of human life, but I also know that prolongation of life is not the only aim of health care. If I agree to perform abortion, I agree it should take place only within an ethical and legal context.
• ကျွန်ုပ်သည် လူ့အသက်၏ အထူးအရေးပါမှုကို သိရှိပါသည်။ သို့တစေ အသက်ဆက်လက် ရှင်သန်ရေးဆိုသည် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ခြင်း၏ တခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက် မဟုတ်သဖြင့် အကယ်၍ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ရန် လိုအပ်လာပါက ဥပဒေကြောင်း အရလည်းကောင်း ကျင့်ဝတ် အရလည်းကောင်း ညီညွတ်စေပါမည်။
• I will not provide treatments that are pointless or harmful, or which an informed and competent patient refuses. I will help patients find the information and support they want to make decisions on their care.
• ကျွန်ုပ်သည် အကျိုးမများစေသော-ဒုက္ခရောက်စေသော-ရှင်းပြသည့်အခါ နားလည် တတ်သိသောလူနာများက ငြင်းဆန်သော၊ ကုသမှုကို မပြုလုပ်ပါ။ လူနာများအား ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်စေရန် လိုအပ်သော သတင်း အချက်အလက်များ ပေးကာ ကူညီပါမည်။
• I will answer as truthfully as I can, and respect patients’ decisions, unless that puts others at risk of substantial harm. If I cannot agree with their requests, I will explain why.
• အခြားသူများအား ဒုက္ခရောက်ရန် မရှိပါက လူနာ၏ အဆုံးအဖြတ်ကို လေးစားလျှက် တတ်နိုင်သမျှ ရိုးသားစွာ ဖြေဆိုပါမည်။ အကယ်၍ တောင်းဆိုချက်က မဖြစ်နိုင်ပါက အဘယ့်ကြောင့် ငြင်းရသည်ကို ရှင်းပြပါမည်။
• If my patients have limited mental awareness, I will still encourage them to participate in decisions as much as they feel able. I will do my best to maintain confidentiality about all patients.
• အကယ်၍ လူနာသည် စိတ်ခွန်အား မပြည့်မီပါက စိတ်မှန်သူများအလား ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ရန် အားပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်သည် လူနာများ၏ အတွင်းရေးကိစ္စများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းပေးပါမည်။
• If there were overriding reasons preventing my keepingapatient’s confidentiality I will explain them, I will recognize the limits of my knowledge and seek advice from colleagues as needed. I will acknowledge my mistakes.
• အကယ်၍ ထိုသို့ လုပ်မဖြစ်သော အခြေအနေရှိပါက ကျွန်ုပ်၏ အသိနည်းမှုအား ရှင်းပြပါမည်။ မိတ်ဆွေများ၏ အကြံဥာဏ်ကို ရယူပါမည်။ အမှားကို ၀န်ခံပါမည်။
• I will do my best to keep myself and my colleagues informed of new developments, and ensure that poor standards or bad practices are exposed to those who can improve them.
• ကျွန်ုပ်သည် မိတ်ဆွေများအား အသစ် တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်မှုများကို ပြောပြပေးနေလျှက် အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းမှုများကို ဖေါ်ထုတ်ကာ တိုးတက်စေရန် အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပါမည်။
• I will show respect for all those with whom I work and be ready to share my knowledge by teaching others what I know. I will use my training and professional standing to improve the community in which I work.
• ကျွန်ုပ်သည် လုပ်ဖေါ် ကိုင်ဖက်များအား လေးစားသမှုဖြင့် မိမိသိရှိ တတ်ကြွမ်းမှုများကို မျှဝေ သင်ကြားပေးပါမည်။ မိမိ၏ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း တိုးတက်လာစေရန် တတ်ကြွမ်း နားလည်မှုများကို အသုံးချသွားပါမည်။
• I will treat patients equitably and supportafair and humane distribution of health resources. I will try to influence positively authorities whose policies public health.
• ကျွန်ုပ်သည် လူနာများအား ကျန်းမာရေး အရင်အမြစ်များကို လူ့အသိဖြင့် အညီအမျှ ဝေငှပေးကမ်းပါမည်။ လူထု ကျန်းမာရေး ပေါ်လစီ ချမှတ်သူများအပေါ် အပြုသဘော သက်ရောက်စေပါမည်။
• I will oppose polices which breach internationally accepted standards of human rights. I will strive to change laws that are contrary to patients’ interests or to my professional ethics.
• နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လူ့အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖေါက်ရာ ရောက်သည့် ပေါ်လစီများကို ဆန့်ကျင် သွားပါမည်။ လူနာများ၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆေးပညာ ကျင့်ဝတ်များနှင့် ဆန့်ကျင်သော ဥပဒေများကို ပြောင်းလဲစေရန် ကြိုးပမ်းပါမည်။
• While I continue to keep this Oath unviolated, may it be granted to me to enjoy life and the practice of the Art, respected by all, in all times.
• ဤပဋိညာဉ်ကို မကျိုးမပေါက် လိုက်နာ စောင့်ထိန်းပါက သာယာ ချမ်းမြေ့သည့် ဘ၀ကို ရရှိလျှက်၊ ဆေးကုသခြင်း အတတ်ဖြင့် လူအများ၏ လေးစားမှုကို အစဉ်ရယူနိုင်သူ ဖြစ်ပါစေသောဝ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 1:10 PM